NMDC Editor – Page4– NMDC
Depatment of Engineering
Department of Student Affair
Department of Curriculum Development and Quality Assurance Development
Bachelor of Arts (English for Professional Purposes)
Author - NMDC Editor
COCA-COLA Next Generation Leaders program
Application for Coca-Cola’s Next Generation Leader Program is now open.
Thursday February 20th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
Universal Robina Corporation Myanmar Internship Program
Welcoming Young Myanmar Talented Students from Our Universal Robina Corporation Myanmar Internship Program Start from 2020, URCMM implements Internship Program to provide the Myanmar students with practical work experience in the multicultural work environment mentored by the skillful supervisors of [...]
(Myanmar) အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် သတင်းအတတ်ပညာအထူးပြု ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အမှတ်(၁)တပ်မတော်အသံလွှင့်တပ်နှင့် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်သို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (၁၅-၂-၂၀၂၀)
Wuhan Coronavirus ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းသင် ဘာတွေသိထားပြီပြီးလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲသိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီဗီဒီယိုလေးကို အခုပဲကြည့်သင့်ပါတယ်။သတင်းအတတ်ပညာ စတုတ္ထနှစ်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများရိုက်ကူးတင်ဆက်သည်။ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းသင်ဘာတွေသိပြီးပြီလဲ။ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ် ဆိုတဲ့ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်တွေကိုသိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီဗီဒီယိုလေးကို အခုပဲကြည်သင့်ပါတယ် ။4th year Journalism students present the awareness video about # Wuhan Coronavirus Posted by Department of Journalism, National Management Degree College on Monday, February [...]
Letter of Cooperation Signing Ceremony between National Management Degree College & uab bank (18-2-2020)
(Myanmar) ပြည်ထောင်စုနေ့အကြို အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ NMDC FOOD FAIR 2020 နှင့် Miss NMDC 2020 ပွဲ (၁၁-၂-၂၀၂၀)
Friday February 14th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ အနုပညာဆုံမှတ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည့် Wall Painting Project ဖွင့်ပွဲ (၁၁-၂-၂၀၂၀)
Thursday February 13th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် မေဂျာပေါင်းစုံ အမျိုးသား-အမျိုးသမီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း (၇-၂-၂၀၂၀)
Clean NMDC Campaign (3-2-2020)
Tuesday February 4th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
2019-2020 Academic Year, English Language Skills Competition
Monday February 3rd, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) Clean NMDC Campaign
Friday January 31st, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) Sustainable in the Hospitality Industry (Seminar by Ms. Yin Myo Su)
(Myanmar) အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၌ မေဂျာပေါင်းစုံမှ ပြင်ပပညာရှင်များအား ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခြင်း (၂၉-၁-၂၀၂၀)
Wednesday January 29th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၌ ကျောင်းတွင်းထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း (၂၈-၁-၂၀၂၀)
(Myanmar) အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ ကျောင်းတွင်းမေဂျာပေါင်းစုံ ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်း
Tuesday January 28th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) Coca-Cola’s Campus Day@NMDC (23-1-2020)
Friday January 24th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် တက္ကသိုလ်များ အထူးတရားသင်တန်း
Thursday January 23rd, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) တပို့တွဲလ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ
Tuesday January 21st, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
Miss NMDC 2020’s Finalists (20 Contestants)
Finalists တွေအားလုံး congratulations ပါ >>> Finalists အယောက် ၂၀ ကလည်း (21.1.2020) ကစပြီး Training ရှိပါမယ် >>> နေရာ – JNL မှန်ခန်း >>> အချိန် – ၃ နာရီ မှ ၅နာရီ P.s. လာပြိုင်တဲ့သူအားလုံးလည်း တကယ့်အလှပဂေးတွေပါပဲနော် ဒါပေမယ့် အယောက်၂၀ ပဲ ရွေးရတာဖြစ်လို့ မပါခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်း နောက်နှစ်တွေမှာ ဆက်ပြိုင်သွားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်
The internship program offers work experience in one of the business entities under Capital Diamond Star Group (CDSG)
Internship Program The internship program offers work experience in one of the business entities under Capital Diamond Star Group (CDSG), to students recommended by universities. The students will be selected throughaprocess of team activities assessment and group discussion [...]